Onyankopɔn Dɔ Kyerɛ Daa Nkwa​—Yohane 3:​16
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mongolian Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Nea Onyankopɔn Ayɛ Ama Wo
“Sɛnea Onyankopɔn dɔ wiase ni, sɛ ɔde ne ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ogye no di no anyera, na wanya daa nkwa.”—Yohane 3:16, Akuapem Twi Bible.
Bible mu asɛm biako a ɛda nkurɔfo ano paa ne saa asɛm yi. Ebinom ka sɛ Bible mu asɛm foforo biara nni hɔ a etumi kyerɛkyerɛ “Onyankopɔn ne nnipa ayɔnkofa mu yiye na ɛsan kyerɛ nkwagye kwan” te sɛ saa asɛm no. Eyi nti wokɔ aman pii so a, wɔbɔ gua a, wotumi kyerɛw “Yohane 3:16” anaa emu nsɛm no bɔ baabi, na ebinom nso tumi kyerɛw gu wɔn kar ne adan ho.
Ebetumi aba sɛ wɔn a wɔde saa asɛm no bobɔ nneɛma ho no wɔ gyidi bi sɛ Onyankopɔn dɔ nti, wɔne daa nkwa ntam nware koraa. Wo nso ɛ? Onyankopɔn dɔ ho hia wo anaa? Wo fam no, dɛn na Onyankopɔn ayɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔdɔ wo?
“SƐNEA ONYANKOPƆN DƆ WIASE NI”
Nnipa bebree gye tom sɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ amansan yi ne biribiara a ɛwom, na ɔno na ɔbɔɔ nnipa. Yɛhwɛ sɛnea abɔde a ɛwɔ nkwa te no a, yetumi hu sɛ obi a onim nyansa na ɔtɔɔ ne bo ase yɛe. Adekyee biara, nnipa pii da Onyankopɔn ase sɛ wama wɔn nkwa. Wogye tom sɛ Onyankopɔn na ɔtɔ nsu bɔ awia, na ɔno na ɔma wɔn mframa, aduan ne nea wohia nyinaa, enti sɛ wobetumi atena nkwa mu anya ahotɔ a, gye sɛ ɔno ara.
Eye sɛ yɛbɛda Onyankopɔn ase wɔ saa nneɛma no ho, efisɛ ɔno na ɔbɔɔ yɛn, na ɔno na yɛdan no. (Dwom 104:10-28; 145:15, 16; Asomafo Nnwuma 4:24) Sɛ yɛhwɛ nea Onyankopɔn yɛ na ama yɛatena nkwa mu a, ɛma yehu sɛ ɔdɔ yɛn paa. Ɔsomafo Paulo kae sɛ: “[Onyankopɔn] na ɔma nnipa nyinaa nkwa ne ahome ne nneɛma nyinaa. Na ɛnam no so na yɛwɔ nkwa na yɛkeka yɛn ho na yɛwɔ hɔ.”—Asomafo Nnwuma 17:25, 28.
Nanso ɛnyɛ nsu ne aduan ne nea ɛkeka ho no nko ara na Onyankopɔn de ama yɛn de akyerɛ sɛ ɔdɔ yɛn. Wapagyaw yɛn ahyɛ yɛn anuonyam, kyerɛ sɛ, wama yɛanya atenka bi wɔ yɛn mu sɛ yɛbɛsom no, na ɔboa yɛn nso ma yɛsom. (Mateo 5:3) Eyi ama ayɛ yiye sɛ nnipa a wotie Onyankopɔn asɛm betumi abɛyɛ ne “mma.”—Romafo 8:19-21.
Yohane 3:16 toa so ka sɛ ɔkwan a Onyankopɔn faa so yii ne dɔ kyerɛɛ yɛn ne sɛ, ɔmaa ne Ba Yesu baa asase so bɛkyerɛɛ yɛn ne Nyankopɔn ne n’Agya ho ade, na owu maa yɛn. Nanso nnipa pii ka sɛ wonhu nea enti a na ɛsɛ sɛ Yesu wu ma adesamma, na wonhu nea ɛwɔ Yesu wu no ho a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn dɔ yɛn. Ma Bible nkyerɛ yɛn nea enti a Yesu bewui ne mfaso a yenya fi so.
“ƆDE NE BA A ƆWOO NO KORO NO MAE”
Ɔdesani biara nkyene bo; onipa biara tumi yare bɔ akwakoraa anaa aberewa na owu fa no kɔ. Nanso ɛnyɛ saa na Yehowa Nyankopɔn hyehyɛɛ no. Ɔyɛɛ no sɛ anka nnipa a wodi kan no betumi atena ase daa wɔ asase so paradise. Nanso na ebegyina ade biako so: Ɛno ne sɛ wobetie no. Onyankopɔn kae sɛ, sɛ wɔantie no a, wobewu. (Genesis 2:17) Onipa a odi kan no yɛɛ asoɔden tiaa Onyankopɔn, na nea ɔyɛe no kɔfaa owu baa ɔne n’asefo so. Ɔsomafo Paulo kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “Ɛnam onipa biako so na bɔne baa wiase, na owu nam bɔne so bae, ma owu trɛw kaa nnipa nyinaa, efisɛ wɔn nyinaa ayɛ bɔne.”—Romafo 5:12.
Nanso Onyankopɔn “dɔ atɛntrenee.” (Dwom 37:28) Bere a onipa a odi kan no hyɛɛ da yɛɛ bɔne no, ɛnyɛ ade a na Onyankopɔn betumi abu n’ani agu so, nanso ɛnkyerɛ sɛ onipa biako bɔne nti, Onyankopɔn twaa adesamma nyinaa asu sɛ wonkohu amane na wonwu. Mmom no, ɔde mmara a ɛne sɛ “ɔkra nsi ɔkra ananmu” no baa mu de biribiara too nea ɛda maa atɛntrenee yɛɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa a wotie n’asɛm betumi asan anya daa nkwa. (Exodus 21:23) Ansa na Adam reyɛ bɔne no, na yare ne onyin ne owu nni nnipa so tumi. Enti asɛm no ne sɛ, ɛbɛyɛ dɛn na nnipa asan akɔ saa tebea no mu bio? Mmuae no ne sɛ, na ɛsɛ sɛ obi de nkwa a edi mu te sɛ Adam de no bɔ afɔre.
Yesu yii ne yam de ne nkwa bɛbɔɔ afɔre wɔ asase so de gyee adesamma fii bɔne ne owu mu
Ɛda adi pefee sɛ Adam aseni a wɔwoo no bɔne mu biara nni hɔ a na obetumi abɔ saa afɔre no. (Dwom 49:6-9) Yesu de, na obetumi, efisɛ wɔanwo no bɔne mu, enti na odi mu sɛnea bere bi na Adam di mu no. Ne saa nti, Yesu nam ne nkwa a ɔde bɔɔ afɔre no so gyee adesamma fii bɔne nkoasom mu. Ɛno bɔɔ kwan maa nnipa baanu a wodi kan no asefo sɛnea ɛbɛyɛ a nkwa a edi mu a efii Adam ne Hawa nsa no, wobetumi asan anya. (Romafo 3:23, 24; 6:23) Biribi wɔ hɔ a ehia sɛ yɛyɛ ansa na yɛanya ɔdɔ kɛse yi so mfaso anaa?
“OBIARA A OGYE NO DI”
Yɛsan kɔ Yohane 3:16 a, ɛtoa so sɛ, ‘obiara a ogye Yesu di no renyera, na obenya daa nkwa.’ Eyi kyerɛ sɛ, sɛ yebenya daa nkwa akyɛde no a, gye sɛ yɛyɛ biribi. Sɛ yebenya “daa nkwa” a, ɛsɛ sɛ yegye Yesu di na afei yetie no.
Ebia wubebisa sɛ: ‘Eyi de, ɛfa osetie ho sɛn? Sɛ́ Yesu kae sɛ, “obiara a ogye no di no” benya daa nkwa?’ Yiw, gyidi ho hia paa. Nanso, ɛsɛ sɛ wokae sɛ gyidi ho asɛm a Bible ka wɔ ha no kɔ akyiri sen sɛ yebegye adi kɛkɛ sɛ Yesu wɔ hɔ. Nhoma bi ka sɛ Hela asɛmfua a Yohane de dii dwuma no “nkyerɛ sɛ obi begye biribi atom kɛkɛ, na mmom ɛkyerɛ sɛ ɔde ne ho bɛto ade ko no so.” (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words) Sɛ Onyankopɔn ani begye yɛn ho a, ɛnyɛ ɛno ara ne sɛ yebegye atom sɛ Yesu ne Agyenkwa no. Ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde Yesu nkyerɛkyerɛ bɛbɔ yɛn bra. Sɛ yɛka sɛ yɛwɔ gyidi na nnwuma nka ho a, ɛyɛ gyidihunu. Bible ka sɛ: “Gyidi a nnwuma nnim awu.” (Yakobo 2:26) Yɛbɛka no kwan foforo so a, sɛ obi ka sɛ ogye Yesu di a, ɛsɛ sɛ ɔma saa gyidi no da adi anaa ɔde saa gyidi no bɔ ne bra.
Paulo kyerɛ asɛm no mu sɛ: “Ɔdɔ a Kristo wɔ no hyɛ yɛn, efisɛ eyi ho na yɛabu atɛn, sɛ obiakofo [Yesu] wu maa obiara . . . Na owu maa obiara na wɔn a wɔte ase no antena ase amma wɔn ho bio, na mmom wɔatena ase ama nea owu maa wɔn na wonyan no no.” (2 Korintofo 5:14, 15) Sɛ yɛn ani sɔ Yesu afɔrebɔ no a, ɛsɛ sɛ yɛyɛ nsakrae wɔ yɛn asetena mu. Ɛnsɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra sɛnea yɛpɛ bio; mmom yɛbɛbɔ yɛn bra sɛnea ɛsɔ Yesu a owu maa yɛn no ani. Eyi kyerɛ sɛ yɛde Yesu nsɛm bɛbɔ yɛn bra. Yɛyɛ saa nsakrae no a, ɛbɛma nneɛma a ɛsom bo ma yɛn, nea yɛpaw, ne biribi foforo biara a yɛyɛ no asesa. Wɔn a wonya Yesu mu gyidi na wɔde saa gyidi no bɔ wɔn bra no, akatua bɛn na wobenya?
‘ƆRENYERA, NA OBENYA DAA NKWA’
Yohane 3:16 fã a etwa to no ma yehu bɔhyɛ bi. Saa bɔhyɛ no kɔ ma wɔn a wonya agyede no mu gyidi na wɔde Onyankopɔn akwankyerɛ yɛ adwuma. Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ saafo no ‘rensɛe na mmom wobenya daa nkwa.’ Nanso akatua a Onyankopɔn de ma wɔn no gu ahorow.
Yesu hyɛɛ bɔ sɛ kuw biako bɛtena ase daa wɔ soro. Ɔkaa no pefee kyerɛɛ n’asuafo anokwafo no sɛ ɔrekɔ akosiesie baabi ama wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wɔne no bedi hene anuonyam mu. (Yohane 14:2, 3; Filipifo 3:20, 21) Wɔn a wobenyan wɔn akɔ soro no “bɛyɛ Onyankopɔn ne Kristo asɔfo, na wɔne no bedi hene mfe apem.”—Adiyisɛm 20:6.
Kristo akyidifo kakraa bi na wobenya saa hokwan no. Yesu kae sɛ: “Munnsuro, nguankuw ketewa, efisɛ mo Agya no apene so sɛ ɔde ahenni no bɛma mo.” (Luka 12:32) Ná saa “nguankuw ketewa” no dodow bɛyɛ sɛn? Adiyisɛm 14:1, 4 ka sɛ: “Mihui, na hwɛ! Oguammaa [Yesu Kristo a wanyan] no gyina [ɔsoro] Sion Bepɔw so, na mpem ɔha aduanan anan a wɔakyerɛkyerɛw ne din ne n’Agya din wɔ wɔn moma so no ka ne ho. . . . Eyinom na wɔtɔɔ wɔn fii adesamma mu sɛ aba a edi kan maa Onyankopɔn ne Oguammaa no.” Sɛ yɛde nnipa 144,000 no toto nnipa ɔpepepem pii a wɔatena ase pɛn no ho a, yetumi hu sɛ wɔyɛ “nguankuw ketewa” ampa. Wɔka wɔn ho asɛm sɛ wɔyɛ ahene, enti henanom so na wobedi?
Yesu kaa kuw a ɛto so abien bi ho asɛm. Wɔn a wɔwɔ saa kuw yi mu yɛ nnipa anokwafo a wobenya nhyira afi ɔsoro Ahenni no mu. Sɛnea Yohane 10:16 ma yehu no, Yesu kae sɛ: “Mewɔ nguan foforo a womfi ban yi mu; wɔn nso ɛsɛ sɛ mede wɔn ba, na wobetie me nne, na wɔabɛyɛ kuw biako anya ɔhwɛfo biako.” Saa “nguan” no ani da so sɛ wobenya nea Adam ne Hawa hweree no; wɔbɛtena asase so daa. Yɛyɛ dɛn hu sɛ asase so na wɔbɛtena?
Bible aka Paradise a ɛreba no ho asɛm pii. Sɛ wopɛ sɛ wuhu a, wubetumi abue wo Bible na woakenkan kyerɛw nsɛm a edidi so yi: Dwom 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Yesaia 35:5, 6; 65:21-23; Mateo 5:5; Yohane 5:28, 29; Adiyisɛm 21:4. Saa kyerɛw nsɛm no ka sɛ bere bi bɛba a akokoakoko, ɔkɔm, ɔyare, ne owu befi hɔ. Kyerɛw nsɛm yi ka sɛ bere no reba a nnipa pa de anigye besisi adan, ayeyɛ mfuw, na wɔatete wɔn mma wɔ asomdwoe mu. * Sɛ wunya hɔ kɔ a, anka wompɛ? Yegye di paa sɛ saa bɔhyɛ no nyinaa bɛbam nnansa yi ara.
ONYANKOPƆN AYƐ BI AMA YƐN
Sɛ wotɔ wo bo ase hwɛ nea Onyankopɔn ayɛ ama wo ne adesamma nyinaa a, wubehu sɛ nea wayɛ ama wo dedaw no mpo dɔɔso. Yɛwɔ nkwa, yɛwɔ adwene, mogya di yɛn mu aforosian, na yenya mframa ne nea ɛkeka ho a ɛma yɛtena nkwa mu. Ne korakora ne sɛ, Onyankopɔn nam Yesu wu no so ama yɛn agyede, na sɛnea yɛasua afi Yohane 3:16 no, nhyira a saa akyɛde no de bɛbrɛ yɛn daakye mpo de, ɛkyɛn so.
Sɛ daa nkwa ne asomdwoe ba ma ɔyare, akokoakoko, ɔkɔm, ne owu fi hɔ a, ɛbɛbɔ kwan ama anigye ne nhyira a enni ano aba. Sɛ́ wubenya saa nhyira yi bi anaa wunnya bi de, egyina wo ara wo so. Enti seesei asɛm a ɛda hɔ ne sɛ, Dɛn na wobɛyɛ ama Onyankopɔn?
^ nky. 24 Sɛ wopɛ sɛ wusua saa nkɔmhyɛ no ho ade pii a, hwɛ nhoma a wɔato din Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? no ti 3. Yehowa Adansefo na wotintimii.